बाचा गरेका आधा काम पूरा भइसके – Yug Aahwan Daily
बाचा गरेका आधा काम पूरा भइसके
युग संवाददाता । ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १२:५२ मा प्रकाशित
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा १६ वटा वडाहरु छन् । त्यसमध्येको वडा नम्बर ७ पनि एउटा वडा हो । यो वडामा धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि यस वडामा विकास निमार्णका काम के कति भए ? जनताको अपेक्षा अनुसार काम भए की हुन सकेनन् ? वडामा सामाजिक सुधारमा के प्रगति भयो ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपाईसँग हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले कुराकानी गरेकी छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सांराशः
वडामा विकास निमार्णका कामहरु भइरहेका छन् । ति कामहरुको अनुगमन गर्ने, विकासका काममा ठेकेदारहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने काम भइरहेको छ । अरु त वडाकै नियमित कामहरु भइरहेका छन् । यस्तैमा व्यस्त छु ।
म निर्वाचित भइसकेपछि वडाकै पहलमा वडा नम्बर ७ र ५ जोड्ने दुई वटा पक्की पुल बनाएका छौं । खारखोली खोलामा पुल निमार्ण गरेका छांै । उक्त पुल सुचारु पनि भइसकेको छ । यस्तै हामीले हाम्रो वडामा दुई वटा बोरिङ पनि खनी सकेका छांै । नौलो सुधार टोल र भानु बाल उद्यान पार्कमा हामीले बोरिङ खनिसकेका छौं । तर हामीले बजेटको अभावका कारण जनतालाई पानी खुवाउन सकेका छैनौं । भावी दिनमा हामीले हाम्रो वडाबासीलाई पानी वितरण गर्ने र पानीको अभाव हुन नदिने योजनामा पनि छौं । अहिले बजेटको अभाव कारण समस्या भएको छ । हाम्रो वडामा पानीको पनि समस्या धेरै नै छ । खडेरीको समयमा पानीको अभाव हुन नदिनका लागि हामीले दुईवटा बोरिङ खनेका हौं । यस्तै सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि भएको छ । नालाहरु विस्तार गर्नेक्रम जारी छ । सडकका छेउछाउमा रहेका पोललाई स्थानान्तरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । विद्यालयहरुलाई पनि सहयोग गरेका छांै । बाल शिक्षालाई पनि सहयोग गरेका छांै । तटबन्धन र सिचाइँ कुलो निमार्ण पनि गरेका छौं । कोरोनाका कारण बजेट कटौती भइरहेका छन् । यसले पनि काम गर्नमा समस्या भइरहेको छ ।
काम गर्न कत्तिको चुनौती रहेछ नी ?
हाम्रो वडामा चुनौती भनेको सडकमा लगत कट्टा नहुँदा भएको छ । बाटोहरु विवादित छन् । विवादित बाटोको विकास गर्नमा समस्या भएको छ । सडक विस्तार गर्दा स्थानीयले मुद्दा मामिला गर्ने र त्यसले विकासमा असर परिरहेको छ । हामीले सबै कामहरु टेण्डर प्रक्रियाबाट गर्न सुरु गरेका छौं । यसले गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ की भन्ने लागेको छ ।
मुख्य समस्या भनेको यही बाटोको लगत कट्टा नै हो । नापी कार्यालयले सबै बाटोहरु नापेर बाटोको लगत कट्टा गरीदिएको भए सबै बाटाहरु खोल्न सहज हुने थियो । अर्काे कुरा बाटोको लगत कट्टा गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट पनि छैन । बाटोको लगत कट्टा गर्न बजेट पनि धेरै लाग्ने भएकाले हामीले नगरपालिकाबाट पनि बजेट छुट्याएका छांै । अब बजेट आयो भने लगत कट्टा गर्न पनि सहज होला र काममा पनि सहयोग मिल्ने आशा लिएका छौं ।
समस्या समाधानका लागि प्राविधिकलाई सहयोग गरिरहेका छौं । विवादित जग्गा धनीलाई नापीमा सम्पर्क गर्न आग्रह पनि गरेका छौं । जग्गाको विवादमा सबै नापी कार्यालयमा गएर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिँदा सहज हुने थियो । यसका लागि वडाले पनि पहल गरिरहेको छ । अर्काे कुरा कोरोनाका कारण पनि काममा समस्या भइरहेको छ । जनतामा डर र त्रास फैलिएको हुँदा काम गर्न सहज वातावरण पनि छैन । गत चैतदेखि हुनुपर्ने काम अब बल्ल सुरु भएका छन् । यसले पनि समस्या निम्तिएको छ ।
मुख्य काम भनेकै वडा नम्बर ७ र ५ जोड्ने दुई वटा पुल निर्माण नै हो । यसले गर्दा स्थानीयलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । अर्काे काम भनेको वडाबासीलाई खानेपानीको समस्या हुन नदिनका लागि दुई वटा बोरिङ खनेका छौं । यसले हाम्रो वडामा रहेको खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्नेछ । शंकर चौकदेखि हटलाइनसम्म सडक कालोपत्रे सम्पन्न गर्दैछौं । त्यसको अर्काे सहायक बाटो पनि कालोपत्रे सम्पन्न गरेका छौं । दैलेख जोड्ने सडकको नाला निमार्ण पनि भएको छ । बालशिक्षा भवन निमार्ण गरेका छौं । इत्राम खोलामा केही मात्रामा भए पनि तटबन्धन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता कति पुरा भयो त ?
जनतासँग भोट माग्न जाँदा गरेको प्रतिवद्धता ५० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी काम पनि भइरहेका छन् । समयमै काम सम्पन्न गर्न अहिले त कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा समस्या भएको छ । विकास निमार्णका लागि आएको बजेट पनि कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा नै सकियो । यसले गर्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । अब बाँकी कार्यकालमा बजेटले भ्याएसम्म जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पनि पुरा गर्नेछांै । हामी ९५ प्रतिशत जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नेछौ ।
हाम्रो अबको योजना भनेको वडामा रहेको खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्ने हो । वडाबासीलाई अब छिट्टै हामी खानेपानी खुवाउछौं । वडाका सबै सडक कालोपत्रे गर्ने, नभएका नाला निमार्ण गर्ने, सडक विस्तार गर्ने, सडकमा रहेका पोलहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने काम सम्पन्न गर्नेछु । अर्काे कुरा जनतालाई निरास गराउने छैन । जनतासँग भोट माग्न जाँदा गरेको प्रतिवद्धता आफ्नो कार्यकाल अवधी भित्र पुरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि गर्छु ।